Gobolka Bari Ibraahin cartan ismaaciil Xaaji Bakiin
Wasiirka Ganacsiga, Farax Dooxajoog
Xiriiriyaha Dalada WAWA Xaawocali Jaamac
Maarso iyo Magaalooyinka Puntland
8da Maarso Maalinta Kahortaga Gudniinka Fircooniga
Waxaa Taariikhdu markey ahayd 7 Maarso laga xusaaya Magaalooyinka Puntland Maalinta Haweenka Aduunka taasoo ay soo Abaabuleen Dalada Haweenka ay ku midoobeen ee WAWA oo ku baahsan Gobolda Puntlan.
Dumarkaa ayaa Halkudhig uga dhigay maalintaa Kahortaga Gudniinka Fircooniga, Munaasabadaa oo lagu qabtay Magaalada Boosaaso qaarkeed ayaa waxaa lagu soo ban dhigay Socod ay soconayeen wateena Boorar ay ku qoran yihiin Hal kudhigyo ay ka mid yihiin joojinta Gudniinka fircoonigaa iyadoo maanta oo ah Maalintii loogu magac daray maalintaa haweemka 8 Maarso ay ku soobandhigeen Holka Dowlada hoose Bandhig aad u balaaran oo ay ka mid ahaayeen Hidaha iyo Dhaqanka Soomaaliyeed.
Waxaa xafladaa ka hadley ugu horeentii Xaawo Cali Jaamac oo ah Xiriiriyaha Dalada WAWA iydoo ka hadashay ka hor taga Wixii wax yeelaya Dumarka lana Qiimeeyo Dumarka aan la oran meesha waa inuusan dumar Joogin oo talada laga Qayb galiyo ileen ragu ma Noolaan karaa Dumar la,aan? ayay tiri, Xaawo ayaa ku soo Dhaweysay Gudoomiyaha Gobolka Bari Ibraahin cartan ismaaciil Xaaji Bakiin oo ku tilmamay Dumarka Udub dhexaadka Ummad kasta.
Waxaa kale oo halakaa ka hadlay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha DGPL Farax Dooxajoog oo aad ugu dheeraaday in ummadu kudhisan tahay Dumarka oo tusaale u soo qaatay Ganacsiga Guud ee soomaaliya ka jira maanta in uu 80% (Boqolkiiba Sideetan) ay dumarku wadaan.
Waxaa iyana halkaas ka hadashay Gabar ka socota Hay,ada EU oo ah tan iyadu maalgalinta ugu badan siisa Dumarka Soomaaliya Guud ahaan.
Manaasabadaa ayaa lagu soo gaba gabeeyay Cayaar kubada Cagta ah oo koob lagu gudoon siiyay Kooxda ku badisay iyagoo u cayaarayay labo kooxood oo ah Ururo dalada ka mida
By: SOOMAAL PHOTOGRAPHER & PUBLISHIN CENTER
Cabdifataax Jamac Mire
TARTANKII QURAANKA EE BOOSAASO